PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-07 - UDr Malinga akasayingeni eyemiklomelo yezindondo
UDr Malinga akasayingeni eyemiklomelo yezindondo
Isolezwe ngeSonto - 2017-05-07 - EZOKUNGCEBELEKA -
UKUNGAWINI emiklomelweni yezindondo asuke eqokwe kuyona uDr Malinga sekumenze waduba amaSouth African Music Awards (Sama) azoba seSun City eNorth West ngoMeyi 27.
UDr Malinga uqokwe emunxeni weBest Kwaito Album nge-albhamu yakhe yakamuva iGoodwill kule miklomelo okuzobe kungeka-23 ibakhona.
Uthe selokhu aqala ukuqokwa emiklomelweni yezindondo akaze awine nhlobo okuyinto esimqede umdlandla.
“Umculo engiwenzayo ngisebenza kanzima kuwona futhi ngenza isiqiniseko ukuthi ngenza othandwa ngabantu kodwa ngiyaphoxeka njalo uma sekumele ngiwine. Kwakhona ukuthi ngiqokwe emunxeni weBest Kwaito Album akunginiki isithunzi esingifanele. Mina angezi ikwaito kuphela. KwiGoodwill engiqokwe ngayo kumaSama kukhona lonke uhlobo lomculo kuyona njengoba kukhona ingoma ye-reggae, house, kwaito neminye iminxa. Bengingaqokwa eminxeni ehlukene ngayo iyodwa,” kusho uDr Malinga.
Uthe ukube ubeqashiwe ukuthi azonandisa kumaSama ubezoyela khona. Uthe uma eya khona kuzobe kufana nokuthi uphelezela abanye abaculi abaqashwe ukuzonandisa kulo mcimbi yingakho engayingeni eyokuya khona ngoba ngeke ayele ukuqokwa kwiBest Kwaito okuyinto engamgculisi kwayona.
NgoMashi uDr Malinga unqume ukuzenzela indondo azihloniphe ngayo ecasulwa ukunabiswa nguNasty C kumaMetro FM Awards. Ngesikhathi ezenzela indondo, uthe kungenxa yokuthi uyabona ukuthi abasunguli bemiklomelo abamniki isithunzi esimfanele. Kunalokho indondo yeBest Song of the Year ayekuyona kule miklomelo yathathwa nguNasty C ongumrepha osemusha emculweni ngengoma yakhe iHell Naw. Wathi uNasty C ibingamfanele le ndondo kodwa wasola umphathi wenkampani yalo mculi iMabala Noise uReggie Nkabinde ngokuthi kukhona abakhokhele ukuthi bamvotele.
Uthe kwi-albhamu yakhe aqokwe ngayo kumaSama iGoodwill bekungabhekwa lonke uhlobo lomculo olukuyona njengoba eyikhiphe yaba amacwecwe amabili wathaka izingoma ezahlukene.
Uqhube wathi into esimjabulisa manje ukubona abantu bemjabulela uma ecula kuphela akasenandaba nemiklomelo yezindondo.